Ahoana ny fanafoanana ny famandrihana Netflix ao anatin'ny 2 Min? - Ahoana No
Te hanafoana ny fisoratana anarana amin'ny Netflix ve ianao? Ireo izay tsy mahazo antoka na tsy mahalala ny fomba hanaovana azy, ity torolàlana ity dia hanampy anao hianatra ireo fomba fantatra rehetra. Toy izany koa, hiasa toy ny famerenana ho an'ireo izay efa mahalala ireo fomba ireo hahazoana antoka fa manaraka tsara ny fomba fanao ianao.
Ahoana no hanafoanana an'i Netflix?
Netflix dia fantatra amin'ny atiny premium, ny interface mora ary ny serivisy mivantana. Na izany aza, indraindray ianao dia mety te hiala sasatra. Angamba te-hanandrana serivisy hafa ianao, na angamba tsy manoratra amin'ny fitsarana ianao. Na inona na inona antony anananao dia mitondra lisitry ny torolàlana isan-tsokajiny izahay hanampy anao hisoratra anarana amin'ny Netflix.
Netflix Statistics (2020) - antsipirian'ny vola miditra
Tsy safidy ny famafana profil -
Netflix dia manana safidy tsara hamoronana profil manokana hizarana ny serivisy amin'ny namanao na fianakavianao. Mamela ny tsirairay hanana traikefa manokana miaraka amin'ny tolo-kevitra arakaraka ny hetsika nataonao taloha.
Na izany aza, ny fanesorana ny mombamomba anao dia tsy hampitsahatra ny famandrihana nataonao. Na dia mamafa ny mombamomba anao rehetra aza ianao dia afaka mamorona vaovao foana. Rehefa mamorona mombamomba anao ianao dia tsy manome vola anao ny Netflix. Toy izany koa, ny tsingerin'ny faktiora dia tsy hifarana amin'ny famafana ny profil.
Aza esorina ny fampiharana -
Fahadisoana iraisana iraisan'ny olona manala ny App raha tsy manaraka ny protokol fanafoanana sahaza azy ireo. Na dia foananao ny cache, esory ny angon-drakitra, ary esory ny App, tsy hampiato ny fihodinan'ny faktiora izany. Ny tsingerin'ny faktiora dia mifandray amin'ny safidinao fandoavam-bola. Mety ho carte de crédit izany, famindrana banky, na zavatra hafa. Ny App anao dia fitaovana fampitaovana fotsiny hahafahanao miditra amin'ireo serivisy nanoratanao anarana.
Fampatsiahivana ho an'ireo mpampiasa fitsapana -
Manolotra a i Netflix Fitsarana 30 andro saika na aiza na aiza , afa-tsy Etazonia. Raha mampiasa kinova fitsapana ianao dia mety nanome mari-pahaizana momba ny fandoavam-bola. Raha vantany vao mifarana ny famandrihanao dia havaozin'i Netflix ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ireto antsipiriany ireto. Raha tsy te hahazo vola ianao na tsy te-hanohy ny serivisy dia mila misoratra anarana amin'ny tanana ianao amin'ny Netflix.
Raha vantany vao tapitra ny andrana fitsapana anao dia tsy hanome anao mailaka izany. Tsy hangataka fahazoan-dàlana hanohy ny serivisy koa io. Hanavao ireo serivisy ho azy i Netflix. Noho izany, amin'ny fitsipika ankapobeny, hametraha fampahatsiahivana mandritra ny andro iray alohan'ny hifaranan'ny famandrihana. Manome anao fotoana ampy hanafoanana ny maha-mpikambana azy.
Ireo safidy voalaza etsy ambony dia tsy mety amin'ny fizotr'ity dingana ity ihany koa. Tokony hanaraka ireo fomba misy voalaza etsy ambany ianao.
Fomba tsara indrindra hanafoanana an'i Netflix:
Tsy maintsy misoratra anarana amin'ilay safidy nampiasanao ianao amin'ny famandrihana. Noho izany, misy fomba telo mahazatra fantatra:
Avy amin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny tranokala na App
Amin'ny alàlan'ny iTunes, raha nividy azy avy teo ianao
Mpamatsy antoko fahatelo izay nanolotra anao Netflix ho bonus
Ny tsirairay amin'ireo fomba ireo dia mitaky dingana manokana harahinao. Ity ambany ity dia torolàlana amin'ny antsipiriany ho an'ny tsirairay amin'ireny. Antenaina fa ho hitanao fa mahasoa sy mora takarina izy ireo. Ka raha tsy misy resaka intsony dia andao hanomboka!
Fomba1: Fomba ofisialy (www.netflix.com)
Ity no fomba ampiasainao hanafoanana ny Netflix amin'ny App na tranokala.
FITSIDIHANA Tranonkala ofisialin'i Netflix ary miditra. Raha mampiasa fampiharana ianao dia sokafy ary safidio ny mombamomba anao
Amin'ny zoro havanana ambony, hisy zana-tsipika midina. Tsindrio eo. Ao amin'ny App, io no ho sarin'ny mombamomba anao, ka kitiho eo izany.
Ny dingana avy eto dia mitovy. Hisokatra ny lisitra. Mitadiava 'Kaonty' ao amin'ilay lisitra ary kitiho eo.
Ankehitriny ianao dia afaka mahita ny isan'ny mpikambana sy ny faktiora amin'ny bokotra bokotra lehibe amin'ny ‘hanafoana ny famandrihana.’ Raha mampiasa ny App ianao dia hanokatra tranokala miaraka amin'ny pejy mitovy ihany i Netflix amin'ny fikitihana ny kaonty.
Tsindrio ny bokotra 'Cancel Members Members'. Mety hangataka fanamafisana aminao izany.
Viola! Vita ny dingana
Ity no fomba ofisialy azonao ampiasaina raha efa nisoratra anarana mivantana tamin'ny Netflix ianao.
Fomba2: Fanafoanana DVD Netflix
Fantatsika rehetra fa serivisy fanofana DVD tamin'ny voalohany i Netflix. Raha mbola manana ny famandrihana amin'ny hofan-trano ianao, dia azonao atao ny manaraka ny dingana voalaza etsy ambony:
Avy amin'ny sokajy ‘Membership & Billing’ dia azonao atao ny mahita ny ‘Cancel DVD Subscription.’
Azonao atao ny manindry azy ary manamafy fa hanomboka ny fanafoanana
Tsotra be izany! Ankehitriny tsy mila manahy momba ny DVD intsony ianao.
Fomba3: Esory amin'ny iTunes
Raha nampiasa iTunes an'ny Apple ianao hahazoana Netflix, dia miova kely ny fizotrany sy ny App. Hamarino tsara fa hampiasa ilay fitaovana amin'ny Apple ID izay manana Netflix. Ity ny torolàlana:
Mandehana any amin'ny toeran'ny fitaovanao Apple (iPhone, iPad, sns.)
Tadiavo ny ‘iTunes & Apps’, avy eo kitiho eo
Ho hitanao ao ny Apple ID anao, tsidiho izany ary kitiho ny View Apple ID
Mandehana amin'ny famandrihana amin'ny Apple ID
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, alao antoka fa io no ID an'ny Apple izay mifandray amin'ny kaontinao Netflix
Netflix dia ao amin'ny lisitry ny fampiharana sy serivisy misoratra anarana
Tsindrio eo, ary avy eo azonao atao ny manafoana ny mpikambana ao
Fomba4: Fomba an'ny antoko fahatelo
Ny antoko fahatelo dia mety ho mpanome findainao na serivisy betsaka sy bonus azonao ho an'ny Netflix. Hiankina amin'ity mpanome tolotra ity izany, ary mila mifandray amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifany ianao na manaraka ny safidiny. Samy manana fomba hafa hanarahana azy ireo ny mpanome tolotra antoko fahatelo. Azonao atao ny mifandray amin'ny tompon'andraikitra mivantana mba hanafoanana ny fisoratana anarana amin'ny Netflix.
Mandra-pahoviana ny famandrihana Netflix aorian'ny fanafoanana?
Tsy hitsahatra hiasa eo noho eo i Netflix aorian'ny fisoratanao anarana. Hisy izany mandra-pahatongan'ny tsingerin'ny faktiora manaraka. Ka raha nofoananao i Netflix amin'ny fanombohan'ny tsingerin'ny faktiora dia hanana iray volana ianao.
Netflix dia tsy manolotra famerenam-bola na dia mahazo famandrihana isan-taona aza ianao ary manapa-kevitra ny hiala ao aorian'ny roa volana. Na izany aza, raha te hanova ny drafitrao ianao ary mahazo fonosana lafo vidy kokoa, dia hampandoavin'ny Netflix anao ny tsy fitovizany ihany koa. Raha ara-dalàna, raha mifindra amin'ny drafitra mora vidy ianao dia tsy hahazo tamberina.
Politika henjana ireo araka ny fepetra sy fepetra alohan'ny hisoratra anarana amin'ny Netflix.
Izay mpampiasa serivisy eto amin'izao tontolo izao dia tokony hisoratra anarana alohan'ny hanombohan'ny tsingerin'ny faktiora vaovao. Na izany aza, misy tranga ao amin'ny Netflix izay ahafahanao mangataka famerenam-bola amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'ny ekipan'izy ireo. Raha misoratra anarana ianao amin'ny andro fandoavam-bola ary mbola miampanga anao i Netflix dia mety hanomboka ny famerenam-bola izy ireo. Na izany aza, tsara kokoa ny tsy mitazona ny fofonainao. Ataovy haingana hatrany ary ampiasao ireo fomba voalaza etsy ambony momba ny fanafoanana an'i Netflix. Antenaina fa nahalala zavatra manome lanja anao ianao.
Fitsarana maimaim-poana mandritra ny 30 andro NordVPN
misoratra anarana ho an'ny amazon prime
sarimihetsika feno an-tserasera 123movies
Ahoana no fomba ahazoana entana maimaim-poana amin'ny fanadihadiana tsy misy
azonao atao ve ny maka sary mihetsika amin'ny netflix amin'ny mac
ahoana ny sarimihetsika bob youtube feno
ny fomba fametrahana kaody amin'ny roblox